Iindiza ezisuka eCalgary ziye eAmsterdam ezisungulwe yiWestJet
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza ezisuka eCalgary ziye eAmsterdam ezisungulwe yiWestJet
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-WestJet yazisa ngenkonzo eAmsterdam isuka eCalgary ngenqwelomoya entsha eza kuqala ngo-Agasti 5 kwinqwelomoya ye-Boeing 787 Dreamliner.
Inkonzo yeWestJet phakathi kweAmsterdam Airport Schiphol kunye neCalgary International Airport iya kusebenza amatyeli amabini ngeveki.
Indlela iya kusebenza kwi-WestJet's 787 Dreamliner.
Inkonzo entsha inikwe ixesha lokuqinisekisa ukuba iinqwelomoya ezisuka eCalgary zisiya eAmsterdam zicwangciselwe ukuxhasa uhambo lwasemva kwemini kunye nokufika kwemini.
I-WestJet namhlanje ibhengeze ukuba iyayandisa inethiwekhi yayo yamanye amazwe ukuba ibandakanye esinye sezixeko ezidityaniswe kakhulu eAmsterdam, eNetherlands. Njengenqwelomoya yenqwelomoya eneenqwelomoya ezininzi ezivela eCalgary, inkonzo entsha evela kwiWebhu yeWestJet iza kusebenza kwi-787 Dreamliner, ukuqala ngo-Agasti 5, 2021.
"Sizibophelele ekubekeni utyalomali lwamanye amazwe, njengeenkokheli zeshishini lokhenketho nokhenketho, ukuxhasa ukuqala kwakhona okukhuselekileyo kukhenketho lwamazwe aphesheya kunye nokuqhubela phambili ukubuyiselwa kwezoqoqosho eCanada," utshilo uJohn Weatherill, I-WestJet, IGosa eliyiNtloko lezoRhwebo. "Iinqwelomoya eziza kuqala ehlotyeni, sijonge phambili ekuncedeni abantu baseKhanada babathandele eYurophu, ngelixa siqhubeka nokubonelela ngeendlela ezinokufikeleleka kwabo bafuna ukutyelela okanye ukuphinda banxibelelane nabahlobo kunye nosapho kwilizwe lethu lonke."
Inkonzo yeWestJet phakathi kweAmsterdam Airport Schiphol (AMS) kunye neCalgary International Airport (YYC) iya kusebenza amatyeli amabini ngeveki ukuqala kweAgasti 5, 2021 kwaye iya kunyuka iphindwe kathathu ngeveki ukusukela ngoSeptemba 9.
"I-Alberta ikulungele ukuvulelwa ihlobo, kwaye esi sibhengezo sivela eWestJet sibonisa ukuba sikufuphi kangakanani ukuba abahambi bamazwe aphesheya babuyele e-Alberta," utshilo uDoug Schweitzer, Umphathiswa Wezemisebenzi, Uqoqosho, Ubuchule, Urhulumente wase-Alberta. "Iindlela ezintsha ziya kukhulisa ishishini lethu lezokhenketho xa liyifuna kakhulu kwaye iphinda ibonakalise iAlberta kwihlabathi ngokuhamba ngokukhuselekileyo."
"Kulo nyaka, iindwendwe zethu ziya kuba nenye indlela ethe ngqo ukusuka eCalgary ukuya kwiziko elixakekileyo lezorhwebo nenkcubeko," utshilo uBob Sartor, uMongameli kunye ne-CEO, iCalgary Airport Authority. "Indlela entsha yeWestJet esuka kwikhaya labo kunye nehabhu eseYYC isiya eAmsterdam, iza kudibanisa abantu baseCalgaria nabaseYurophu nabaseYurophu baye eAlberta ngesinye sezikhululo zeenqwelo moya ezixhumene kakhulu kwihlabathi."
Indlela iya kuqhutywa kwi-WestJet's 787 Dreamliner, enezihlalo zenqwelomoya zenqwelo-moya ezihlala kwikhabhathi yeshishini kunye nokutya okufunekayo kunye nokuzonwabisa. Inkonzo entsha inikwe ixesha lokuqinisekisa ukuba iinqwelomoya ezisuka eCalgary zisiya eAmsterdam zicwangciselwe ukuxhasa uhambo lwasemva kwemini kunye nokufika kwemini. Unxibelelwano olufanelekileyo luyafumaneka ngeAmsterdam ukuya kwiindawo ezininzi ezikumgangatho wehlabathi, kubandakanya iAthene, iBerlin, i-Edinburgh, iLisbon, iMadrid, iManchester, iMilan, iMunich, iVienna, iVenice nokunye.
"Siyavuya kukubuyela kweendlela zomoya ezibalulekileyo zamazwe aphesheya eAlberta," utshilo uDavid Goldstein, iCEO, iTravel Alberta. "Ngelixa sinobudlelwane obude, obufudumeleyo kunye nabakhenkethi baseDatshi abafuna ukujonga indawo yethu, iAmsterdam ikwayindawo ephambili yokutyela abahambi abavela kuyo yonke iYurophu. Sijonge ukusebenza neWestJet njengokuba isandisa iindlela zayo eziya e-Alberta. ”
Iinkcukacha zenkonzo yeWestJet phakathi kweCalgary neAmsterdam:
I-Calgary -Amsterdam 2x ngeveki Agasti 5-Septemba 5, 2021
3x ngeveki Septemba 9-Okthobha 31, 2021
EAmsterdam-eCalgary 2x ngeveki Agasti 6-Septemba 6, 2021
3x ngeveki NgoSeptemba 10-Novemba 1, 2021